महिला र पुरुष दुबैले धेरै बेरसम्म गर्न न’हुने ३ काम ! जानी राखौं ! – Life Nepali
महिला र पुरुष दुबैले धेरै बेरसम्म गर्न न’हुने ३ काम ! जानी राखौं !
बिभिन्न बैज्ञानिक अध्ययनले मात्र होइन, विष्णु पुराणमा विभिन्न शास्त्रीय महत्व र मानिसले पालना गर्नुपर्ने नियमको बारेमा बताइएको छ । विष्णु पुराणमा भूगोल, कर्मकाण्ड, ज्योतिष, राजवंश र भगवान श्रीकृष्णको चरित्रको बारेमा वर्णन गरिएको छ । १) -निरोगी तथा राम्रो बनिराख्नका लागि हरेक दिन विहान नुहाउनुपर्दछ । यदि नुहाएको बेला दिमागमा केहि कुरा आयो भने शुभ फल प्राप्त हुन्छ । विहानै उठेर सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिला ताराहरुको छाया हेर्दै नुहाएमा अलक्ष्मी, समस्या र नराम्रो शक्ति नष्ट भएर जान्छ । नुहाउने समयमा गुरु मन्त्र, स्तोत्र तथा श्लोकहरु वा भगवानको नाम लियो भने पनि अक्षय पुण्यको लाभ हुन्छ ।तर धेरैबेरसम्म नुहाउँदा भने स्वास्थ्यलाई हा’नी हुन्छ ।
-जीवनशैलीमा निन्द्रा राम्रो लिन आवश्यक छ । हरेक दिन ७ देखि ९ घण्टासम्म निदाउन आवश्यक हुन्छ । यदि राम्रो निन्द्रा पुगेन भने तपाई बिरामी हुनुहुनेछ । शास्त्रका अनुसार विहान छिटै उठ्ने र बेलुका चाँडै सुत्नुपर्दछ । सूर्योदय भन्दा पहिला उठ्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मात्र होइन यसले जीवनमा समृद्धि पनि लिएर आउँछ । विहान धेरै समय सुत्दा तपाईलाई विभिन्न रोगले सताउँने र लक्ष्मी पनि रु’ष्ट हुने मान्यता छ। त्यसैले धेरै समय सुत्नु हुदैन ।
-विहानको समयमा श्रीमानश्रीमतीले शारी’रिक स’म्पर्क गर्न नहुने पनि शास्त्रमा उल्लेख छ । किनभने विहानको समयमा शा’रीरिक स’म्बन्ध राख्दा विभिन्न रोगले सताउँदछ । साथै बिभिन्न अध्ययन अनुसार धेरै समय सम्भोग गर्नु राम्रो नहुने बताइको छ । सामान्यताय १५-२० मिनेटलाइ उपयक्त समय अवधि ठानेको छ ।
Previous युवकलाई पे’ट दु’खेर अस्पतालमा जाच्न जाँदा ग’र्भवतीको रिर्पोट आएपछि …
Next महिला र पुरुषले एकअर्कासँग लु’काउनैपर्ने पाँच कुरा ! जानी राखौं !
46 seconds ago Life Nepali